(Last Nohavaozina: 04/06/2021)
Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy mety ho ny tsara indrindra ao amin'ny antoko Holland. On 27 Aprily, dia mankalaza Mpanjaka Willem-Alexander ny andro nahaterahan'i amin'ny mozika, eny an-dalana antoko, parasy tsena, ary mahafinaritra entanao. Ny mpanjaka ny tenany mandeha nitety ny tany amin'ny family. Ny alina talohan'ny andro Mpanjaka, King's Night dia ankalazaina miaraka amin'ny seho mozika any The Hague sy ny tanàna hafa ary ny parasy lehibe indrindra ao amin'ny firenena ('Maimaim-poana') tsena in Utrecht. Vonona mba hahitana izay rehetra momba izany? eto no mahatonga tokony ho Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy.
Juliana, ny mpanjakavavy sy Wilhelmina manaraka ny zanakavavin'i, malaza Queen ny andro 30 Aprily tamin'ny matso amin'ny Soestdijk. Beatrix Nankalaza Queen koa ny andro 30 Aprily (azy manokana fitsingerenan'ny andro nahaterahana dia amin'ny volana Janoary) fa mifanohitra amin'ny reniny, dia naka azy sy ny fianakaviana manontolo Nandeha nanerana ny firenena mba hitsidika maro kaominina. Mpanjaka Willem Alexander dia nanaraka an'io fomban-drazana io. Teraka tamin'ny 27 Aprily ary izany dia tonga ny andro ofisialy in 2014 noho ny Fankalazana ny Fetin'ny Mpanjaka any Holandy.
Raha Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy, olona nahazo mivarotra zavatra teny an-dalana tsy mila fahazoan-dalana. Free Tsenan'ny gropy dia atao anaty valan-javaboary sy arabe, amin'ny olona maro tsy ilaina manolotra ny fananany, mozika, na fialamboly hafa amidy. Eritrereto ho toy ny garazy fivarotana, fa ny maro kokoa! in Utrecht, ny parasy tsena dia manomboka ny alina talohan'ny andro Mpanjaka. Mahazo mandeha àry ny kiraro.
Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy dia tsy hoe fotsiny ho an'ny olon-dehibe. Misy be dia be ny asa mitranga manerana ny tanàna ny tanora am-po sy ny tanora, anisan'izany face-hoso-doko, lalao, ary fanatanjahan-tena zava-mitranga. Jereo ny Mpanjaka fianakaviana ny andro mahafinaritra pejy Raha mila fanazavana fanampiny.
Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy dia andro tsy fiasana nefa azo antoka fa tsy ho andro fitsaharana. ny holandey, aloha-pats, ary ny mpizahatany dia mirohotra mankao Amsterdam mandritra ny andro fankalazana iray. Ny fomba nentim-paharazana mahafinaritra dia manomboka eo amin'ny ankatoky ny andro lehibe (Mpanjaka Night) ny fetibe rivo-piainana mitohy manerana ny tanàna ao amin'ny mpanjaka ny andro. DJs milalao antoko eo amin'ny kianjam-bahoaka, sambo voaravaka mamirapiratra mameno lakandrano, ary ny mozika mivantana dia niparitaka teny amin'ny arabe avy Cafe patios. Read more about Mpanjaka ny zava-nitranga Day.
ny holandey, aloha-pats, ary ny mpizahatany dia mirohotra mankao Amsterdam mankalaza ny Andron'ny Mpanjaka any Netherlands. Ho azo antoka tsy malahelo avy amin'ny fahafinaretana, ary mampiasa boky ankehitriny Save A Train Tsy misy saram miafina, ary mora tahaka ny 1, 2, 3!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrating-kings-day-netherlands%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)